भेटियो हराएको ११ नं. सीमास्तम्भ, अब विवादित भूमिबारे यकीन गर्न सहज - Everest Dainik - News from Nepal
हुम्ला, नेपाल र चीनसीमा क्षेत्रको ११ नम्बर सीमास्तम्भ भेट्टिएको छ । हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार स्तम्भ भेट्टाएको जानकारी नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले बताएका छन्।
सीमास्तम्भ नाम्खा गाउँपालिका–६ को टाकुलेमा भेटिएको हो । हिउँ र माटोले पुरिएको अवस्थामा स्तम्भ भेटिएको उनले बताए । यो स्तम्भ भेटिएपछि अब रेखांकन गर्न सहज हुने भएको छ । यसले अहिले चीनले संरचना बनाएको लोलुङजोङ क्षेत्र कतातिर पर्छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस ललुङ्जोङमा निर्माण गरिएका सबै भवन चिनियाँ भूभागमै रहेको निष्कर्ष
ट्याग्स: 11 No. Pillar, nepal china border